Gbasara Anyị - WRSP
E guzobere World Religions & Spirituality Project (WRSP) na 2010 na Virginia Commonwealth University. Ebumnuche nke WRSP bụ ịnye ebumnobi, ntụkwasị obi na ozi zuru oke banyere ọtụtụ okpukpe na nke ime mmụọ dị iche iche nke ụwa. Akụkụ bụ isi nke weebụsaịtị WRSP bụ, profaịlụ nke mmegharị okpukpe na nke mmụọ nke oge a, okpukpe ụwa guzobere, na mmegharị okpukpe na nke ime mmụọ. N'ebe o kwere mee, ndị ọkà mmụta na-akwadebe profaịlụ maka otu ndị ha depụtara. Ihe profaịlụ ọ bụla gụnyere ngosipụta nke otu akụkọ ihe mere eme, nkwenkwe pụrụ iche, mmemme, nzukọ na onye ndu, yana nsogbu / nsogbu. Karịsịa maka ndị otu ọhụụ, ozi a pụrụ ịdabere na ya anaghị adịkarị mfe, weebụsaịtị a na-enyekwa ozi zuru oke, nke ziri ezi maka ndị ọkà mmụta okpukpe, ụmụ akwụkwọ, ndị nnọchi anya mgbasa ozi na ndị nwere mmasị onwe ha n'ịghọta ụdị okpukpe dị iche iche na nke ime mmụọ na ụwa nke oge a. Na mgbakwunye na profaịlụ otu, WRSP nwere ngalaba ARTICLES / PAPERS, nke nwere agụmakwụkwọ na-agbakwunye ma nye ọnọdụ maka profaịlụ ahụ; otu ARCHIVES, nke na-akwado akwụkwọ ndị dị mkpa n'akụkọ ihe mere eme maka ụfọdụ ìgwè ma na-enye njikọ na saịtị ndị ọzọ na-edebe ihe ochie; WRSP FORUM, nke na-agba ajụjụ ọnụ na ndị na-enye ozi dị mkpa na echiche dị iche iche na otu na okwu metụtara ọrụ WRSP; Njikọ WRSP VIDEO, nke na-enye njikọ maka ihe nkiri vidiyo ndị nwere ike ịchọta n'ịntanetị; na WRSP SPECIAL PROJECTS, nke na-enye ihe niile nke WRSP maka isiokwu ma ọ bụ mpaghara ala.
Okpukpe nke Okpukpe na Ime Mmụọ na-ewepụta mmụọ nsọ ya na nkwalite mbụ ya site na Projectpage New Movements Homepage Project, nke tọrọ ntọala na 1995 site n'aka Prọfesọ Jeffrey K. Hadden na njikọ nke usoro mmụta na-aga n'ihu na mmegharị okpukpe ọhụrụ. N'okpuru nduzi nke Hadden, Homepage Movements Homepage toro n'otu n'ime saịtị kachasị ukwuu n'ụwa ma bụrụ ihe enyemaka Internetntanetị dị mkpa maka agụmakwụkwọ na nkuzi na mpaghara mmegharị okpukpe nke oge a. Mgbe Prọfesọ Hadden nwụsịrị ọnwụ na 2003, Prọfesọ Douglas E. Cowan, Mahadum Renison nke Mahadum nke Waterloo, weghaara ọnọdụ nke Onye isi Nduzi iji kwenye na ịga n'ihu na weebụsaịtị. Na 2010, Prọfesọ David G. Bromley, Mahadum Virginia Commonwealth, ghọrọ Onye isi oru ngo ma bute ma gbasaa ozi nke ihe ghọrọ World Religions & Spirituality Project (WRSP) ugbu a. Agbakwunyere ihe ndi ozo na oru mbu, ma ndi edeputara ugbua site na ndi okacha amara nke uwa nile bu ndi dere akwukwo banyere ndi ha choro, ndi otu ndi guru akwukwo na acho ndu ndi isi na WRSP site na mmepe ma obu WRSP SPECIAL PROJECTS.
Onye nhazi / onye nduzi iwu:
Prọfesọ, Mmemme Okpukpe, Ụlọ Akwụkwọ nke World Studies, Virginia Commonwealth University
Prọfesọ, Ngalaba Sociology, College of Humanities and Sciences, Virginia Commonwealth University
Na-akwado / SUPPORTERS
Okpukpe nke Okpukpe na nke Ime Mmụọ na-akwado ekele site n'aka Ụlọ Akwụkwọ Honors nke Virginia Commonwealth University Virginia Comonwealth University Honors College, Shand Research Grant Programme nke Society maka Ọmụmụ Sayensị Ọmụmụ nke Okpukpe, na Thomas Robbins Trust. Ego a bu ihe kacha mkpa n'inwe mmepe mbube na mmepe. WRSP dị n'usoro iwu ụlọ ọrụ iji kwado ọrụ nke ụlọ na ịkwado ọrụ ahụ.
NDỊ NKWU AHỤRỤ
Ọtụtụ ụmụ akwụkwọ a ma ama esonyere na mmepe nke WRSP. Ndị a Research Associates aghọwo ọrụ nduzi na WRSP ma nwee ngalaba na-edekọ aha na ndị otu edemede maka ọrụ ahụ.
Nwaanyị Amanda Telefsen (2011-2012)
Nne Leah Hott (2012-2013)
NDỊ NA-AHỤ AKWỤKWỌ
Ọtụtụ ndị na-amụ akwụkwọ na ụmụ akwụkwọ gụsịrị akwụkwọ enyerela aka n'ịchịkọ data na ntinye ederede maka WRSP dịka ọrụ ha.
Nwunye Stephanie Edelman (2011-2012)
Mazi Reed Braden (2016-2017)
Mazi Luke Alexander